Jappaanitti dubartoota bakka hojiitti 'manatsarii' fayyadamuu dhorkuun, mormii kaase - BBC News Afaan Oromoo
Biyya Jaappaanitti dhaabbileen tokko tokko hojjetoota dubartoota ta'an akka 'manatsarii' (gizaaza) ofirraa kaasan gaafatamuu isaanii gabaasaaleen dhaga'amaniiru.
Gabaasa kana waliin walqabatees, bakka hojiitti 'manatsarii' godhachuun biyyattii keessatti dhimma namoota hedduu aarse ta'eera jedhame.
Akka dhaabbileen sabaa himaalee baayyeen jedhanitti kampaaniiwwan hojjetoonni dubartoota ta'an sababoota gara garaatiif akka golgaa ijaa (gizaaza) hin godhanneef dhorkaniiru.
Dhaabbileen dubartoonni akka 'manastarii' hin godhanne dhorkan keessaa tokko akkas jedhe: "Dubartiin suuqii keessa hojjettu tokko 'manatsarii' yoo godhatte kan isheen 'fuula naatoo qabu hin agarsiisne fakkeessa'."
Dubbiin kun ammoo miidiyaalee hawwasummaarratti dhimma marii ijoo ta'aa jira. Kanumaan walqabsiisuun, uffanni akkamiitu uffatamuu qaba kan jedhuufi dubartoonni bakkawwan hojiitti akkamiin ilaalamu kan jedhu kaasuun falmaa jiru.
Nippon TV neetiwoorkiifi Biizinas Insaayider miidiyaalee dhimma kana gabaasan keessaadha. Miidiyaaleen idilee kunneen akkamitti dhaabbileen industirii gara garaa keessa jiran akka dubartoonni 'manastarii' hin godhanneef dhorkan gadi fageenyaan ilaalaniiru.
Dhaabbilen akka dubartoonni 'manatsarii' hin godhanne dorkan kunneen akka sababaatti kan kaasan qabu.
Fakkeenyaaf, hojjetoonni daandii xiyyaaraa keessa hojjetan kan dhorkamaniif sababii nageenyaaf yoo jedhan, dubartoonni sektara miidhaginaa keessa hojjetan ammoo miidhaginni ykn faayaan isaanii akka sirriitti argamuuf jedhu.
"Dhorkaan" jedhame kun imaammataafi seera ittiin bulmaataa kampaanotaarraan kan ka'es haata'u waanuma shaakala bakka hojii baratameef kan beekame hin jiru.
Kan fedhe ta'us garuu, dhimmi kun dubbii ijoo miidiyaalee hawaasummaa ta'ee jira.
Duulli haashtaagii "manatsariin dhorkaadha (glasses are forbidden)" jedhu Jappaan keessatti beekameera. Duulli kun Jimaata kana tiwiitera irratti ijoo dubbii ta'eera.
Kumikoo Nemotoo, Yunvarsiitii Kiyootootti piroofeesara Sooshooloojiidha. Namoonni Jaappaan keessa jiran imaammatawwan "boodatti hafoo ta'an" irratti walfajaa jira.
Akkas jette Piroofeesarittiin: "Sababiin dubartoonni bakka hojiitti akka 'manastarii' hin godhanneef dhorkamaniif waanuma hiika hin qabneefidha.
Kun guutummaatti dhimma koorniyaadha. Kun kan sirriitti loogii uumudha."
Itti dabaluudhaan, gabaasichi kan agarsiisu, ilaalchaawwan "dulloomoo, boodatti hafaa Jaappaanotaa" agarsiisa.
"Kun akkaataa dubartoonni hojii isaaanii itti hojjetanii miti. Kampaaniin bifa dubartiidhaafi dubartii fakkaachuuf bakka kenna. Kanaaf, 'manatsarii' uffachuun kan fakkaatanii mul'ataniin fallaa taasisa waan ta'eef," jette Piroof. Nemotoo.
Dubbiin ijoo marii ta'e kun dhimma walfalmisiisaa ta'e kan biraa kanaan dura dubartoonni bakka hojiitti fayyadamuun kophee koomee dheeraa walfalmisiisaa ture akka irra deebisee akka yaadatamu taaisedha.
Yeroo sanattis taatoofi barreessituunbeekamtuu Jappaan Yuumii Ishikiiwaa akaakuu uffannaa namaaf murteessuun akka dhaabbatuuf iayyannoo walitti qabaa turte.
Kunis erga dubartoonni bakka sirna awwaalchaatti keessumeessan akka kophee koomee dheeraa godhata taasifamaniin boodadha.
Sosochiin kun ammoo deggersa gurguddaa kan argateefi hordoftoota miidiyaalee hawaasummaa cimaa kan qabu ta'eera.
Deggertoonnis sagalee deggersaa yeroo kennanniif hashtag #KuToo irratti kennuudhaan miidhama isheen jira jettee dhageessisuun ishee cinaa dhaabbataniiru.
Duulli Jaappaanitti ta'e kun sochii kan #MeToo jedhuun banamee miidhaa saalaa dubartootarra ga'u hambisuuf guutumaa addunyaarratti taasifamaa ture waliin deemaa tureera.
Goodayyaa suuraa Yumii Ishikawaa iyyannoo walitti guuraa turte Waxabajjii keessa mootummaa Jappaanitti geeffatte
Namoonni warri duula gaggeessan akka jedhanitti yeroo hojii barbaadataaniifi iyyannoo galfatan kophee koomee dheeraa godhachuun akka dirqamaattti ilaalama.
Warreen akka dhiibbaan akkasii kun hafuuf hojjetan erga ministirri Jaappaan kampaanonni akkaataa uffannaa kophee koomee miilaa dirqama taasisu hojiirra akka oolu gochuun "barbaachisaadha" jedhanii caalaa haaran.
Pirof. Nemotoo itti fufuudhaan akka jettetti, Jappaan keessatti mariin dubartootaa itti fufuun imaammata"kophee koomee dheera qeeqaniiru".
"Caalmaadhaan dubartoonni kan madaalaman bifa isaaniitiin. Ergaan imaammatawwan kunneen dabarsan kanumadha," jette.